WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: Burmese Harp actually brought by Bengalee from India in 10th Century or Earlier
Burmese Harp actually brought by Bengalee from India in 10th Century or Earlier
Burmese received their cultural heritage inherited from their Bangalee ancestors. The modern Burmese owe it to their ancestors, the Bengalee from Bengal, India. Where the Burmese has got the Arched Harp from? There is reliable source, text and evidences to support that the Burmese harp came from India, Bengal with their (Burmese's) ancestors.
We hope that after reading this article, small little work,all the Burmese will realise and give respect and tribute to their ancestors. The followings are some extracts from the webpage provided for the readers for further reading. Recently the Kim-hae descendants of Indian princess of South Korea went to India and made tribute to the maternal ancestors. We also hope that Burmese will also followagood example and give respect to their Indian Ancestors. It is very long over due.
The theory that the arched harp came from Bengal to Burma after the eighth century A.D. is based upon two related sets of evidence. (a) The harps on temple reliefs of medieval Burma (A.D. Iooo-I200) are like the harps found on temple reliefs of Bengal. The Bengal harps, the last to appear in India, haveacharacteristic elongated shape with the body merging imperceptibly into the neck (P1. V, a). Aboutacentury later similar harps appear in Burma on temple reliefs at Pagan (P1.V , b). (b) Various sorts of artistic influences are known to have passed from Bengal to Burma in the early years of the Pagan dynasties (A.D. Io0-I200). Therefore it has seemed logical to assume that the harps as seen on the Pagan temple reliefs are derived from the Bengal harps. The difficulty arises when it is automatically assumed that the Pagan harps are the immediate ancestors of today's Burmese harp.
Refer the following webpage.
How pleasant and enjoyable is the music of the Arched Harp as we may find on youtube.
သီချင်းစာသား (ရေးတင်သူ သိန်းသိန်းဋ္ဌေး)
စိန်ခြူးကြာညောင်။ လရောင်-လင်းပါလို့။ မှန်ရွှေပြူတင်းရယ်က-မယ်ခုမျှော်။ ။ သုံးချက်စည်တော်။ ရိုက်ဆော်ညှင်းတယ်လေး။ လင်းရွှေကြက်ဆော်။ ။ သဇင်သင်းပါတဲ့-ခင်းပြန့်ပေါ်။ လာနိုးငယ်မယ်မျှော်လို့။ တကိုယ်တော်ထူး။ ထွေရာစိတ်ကူးပါလို့။ ဖူးရွှေလက်တင်။ ဖြစ်ရှေးကုန်စင်။ ဘ၀င်တုန်ဆွေးတယ်လေး-တွေးကြံလိုက်ရင်။ သစ္စာတော်စူးပါစေ့-ဆိုဦးကပင်။ ခင်လေးကို-မောင်ကြင်ငဲ့။ ရာသက်တွင်ဘဲ။ နောင်သွေမလွှဲပါဘု။ ယုံတော့မေ။
By Thein Thein Htay
ပြဒုဆောင်ဘွေ-သီဟာတင့်တယ်လေး။ စိုးညာမြင့်နေ။ နတ်ဒေ၀ီဖြားသော်လဲ တပါးကိုမသွေ။ ရှစ်ဗြဟ္မာခြွေပါလို့။ အောင်ဇေယျာညွှန်း။ မတ်ခြွေရွေဝန်းငယ်နှင့်။ ရေသွန်းတော်ခံ။ မဟေသီမှန်၊ ဒေ၀ီတပ်တယ်လေး။ ဦးဆယ်ထပ်ရံ။ ။ သည်မယ်တင်စားပါလို့၊ ကြင်အားငယ်သန်၊ ခုများမှာ-တဥာဏ်နှင့်၊ မူဟန်တော်ခြား။ ပြုတော်မူအားသူမို့၊ မျက်ထားတော်မှုံ။ မသိပြင်ပြင်။ အရင်သူစိမ်းတယ်လေး။ ပိန်းပိတ်လို့ခြုံ။ ။ (သဖြန်) အချစ်ကိုယုံ၊ ပုံပါငဲ့အလုံး။ ။ ရှောင်လွှဲနေပျော်လို့၊ မကြည်သော်- မျက်တော်ဖုံးတယ်။ ဘယ်တွက်ကြောင့်မုန်း။ ။ (ဂီတ၀ီသောဓနီမူ)
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 7:31 PM
Mon, Mon-Khmer, Pyu (Tritsu) and Mramma (Buramah) ...
Burmese Harp actually brought by Bengalee from Ind...
Mon Kingdom, Hamsavati
Thilawa , The Prince of Yamethin (Is Yamethin=Rama...
Mon, Mon-Khmer, Siam and Kamboja, Palaung and Wa